Nwere ike iche n'echiche gam akporo na-enweghị Google? Eelo nwere ike ime ka ọ mee | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Ọ dị mma na anyị anaghị atụrụ ime gam akporo na-enweghị Google. Ma ọ bụ Google na-enweghị gam akporo, ọ na-enwekwa uche zuru oke. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, na mmalite nke ihe niile, Google nyere nkwado ego dị mkpa maka ọrụ gam akporo mbụ iji hụ ìhè. Kemgbe 2.005 Google ghọrọ onye nwe gam akporo Inc. Na Ruo ihe karịrị afọ iri ọ bụ sistemụ mkpanaka nke ụlọ ọrụ nke nnukwu G.
Ndị ọrụ gam akporo anyị na-kpam kpam iji nwere Google ọrụ na ngwa. Na ngwaọrụ niile nke na-eji sistemụ arụmọrụ gị, ha na-anọ mgbe niile. Ndị na-eji ma na-enwe mmasị na ngwa ndị a kwa ụbọchị anaghị ahụ nsogbu ọ bụla na nke a. Mana enwere ngalaba ndị ọrụ na-ele ya anya dị ka ihe mkparị ịnweta ngwa ndị a "n'ụsọ" na ngwaọrụ ha.
1 Eelo na-akwado Android OS na Google n'efu
2 Ndi gam akporo na enweghi Google nwere odi n’iru?
Eelo na-akwado Android OS na Google n'efu
O bu eziokwu na N'ihi ọrụ dịgasị iche iche nke Google nyere, anyị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike ịnweta na ngwaọrụ ọ bụla gam akporo kọntaktị anyị, foto anyị, faịlụ, ozi ịntanetị. Na ihe niile a naanị site na ịchọpụta akaụntụ Google anyị.
Nke a, nke ọtụtụ bụ mma na ihe na-eje ozi iji kwado ọrụ anyị kwa ụbọchị. Onwere ndị na-ahụta ya dị ka nnukwu nsogbu. Nsogbu a, na Google nwere ike ịnweta data anyị niile ma gbakọta, site na ngwa ya, ọtụtụ ozi banyere anyị.
Eelo bu oru ngopulu nke Gaël Duvan, onye ọsụ ụzọ ukwu ahụ na maka mmejuputa Linux na France. Nnukwu onye na-agbachitere sistemụ arụmọrụ yana ndepụta nzuzo nzuzo dị elu n'ihe metụtara nke ndị dị ugbu a na-enye. Echiche bụ isi nke Eelo bụ na-enye ọrụ nke sistemụ arụmọrụ nke ekwentị na-enweghị ntọala ya na ọrụ Google.
Ndi gam akporo na enweghi Google nwere odi n’iru?
Eelo jiri usoro Lineage OS. A sistemụ arụmọrụ sitere na CyanogenMod ọ na-enyekwa oghere mepere emepe dabere na gam akporo Google. Na ya bu n'obi ka etolite na smartphones na mbadamba maka ndị na-eche na Google, site na ngwa ya, na-emejọ nchịkọta nke data nzuzo.
Mana olee otu sistemụ arụmọrụ Android nwere ike isi na-enweghị Google? Ọ bụ eziokwu na enwere ngalaba ọrụ na ha ga-eji ọ pleasureụ ahụ ya. Na ndị na-ewere Eelo dị ka ihe ga-ekwe omume na ha ga-adị njikere ịwụnye ma jiri na ngwaọrụ ha.
Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ gam akporo na-ewere ya dị ka ihe dị mkpa ịnweta Google na ọrụ ọ na-enye. Site na igwe nyocha na ngwa ọ bụla etinyegoro dị mkpa maka ọtụtụ. Ka ọ were Nnọọ, n’ebughị n’obi ilelị ọrụ a rụworo ọrụ na ya nke na-enyekwa sistemụ arụmọrụ e mere akọ na uche ọ nwere ike ọ gaghị abụrịrị ezigbo ihe ọzọ na gam akporo na anyị niile maara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Nwere ike iche n'echiche gam akporo na-enweghị Google? Eelo nwere ike ime ka ọ bụrụ eziokwu